हाम्रो बारेमा गर्भपतन चक्की कसरी प्रयोग गर्ने
हामी को हौँ?
HowToUse जहाँसुकै बसेका भए पनि सबै महिलाको सुरक्षित गर्भपतनको विकल्पमा पहुँच हुनु पर्छ भन्ने विश्वास लिएका समर्पित व्यक्तिहरु रहेको एउटा अनलाइन समुदाय हो।
हामी के गर्छौँ?
HowToUse ले प्रयोग गर्नु अघि के कुरामा ध्यान दिने, गुणस्तरीय गर्भपाती चक्की कहाँ पाउने, तिनलाई कसरी सुरक्षित रूपले प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरे पछि के हुन्छ, के को लागि तयार रहने, आवश्यक परेमा कस्तो अवस्थामा चिकित्सकीय सहयोग लिने भन्ने गर्भपाती चक्की बारेका तथ्य र सूचना उपलब्ध गराउने काम गर्छ।
हामी कहाँ काम गर्छौँ?
HowToUse विश्वव्यापी संस्था हो। हामी विश्वभरिका महिलाहरुलाई सूचना र सामग्री उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले आफ्नो वेबसाइट 30 ओटा भाषामा अनुवाद गरेका छौँ यहाँ नभएको अरू कुनै भाषामा हेर्न चाहनुहुन्छ? मा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। info@howtouseabortionpill.org
यो वेबसाइटका हरेक पृष्ठमा रहेका सूचनाको सत्यता सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको छ। यसो भए तापनि यसका विषय वस्तु समय समयमा परिवर्तन हुन्छन् र लेखकहरुबाट कुनै खास समयमा यसमा प्रस्तुत सूचनाको सत्यताको दायित्व स्वीकार गर्न सकिँदैन।
सेवाहरू प्रयोग गरेर तपाईं सेवाका सबै सर्तहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ जुन समय-समयमा हामीद्वारा अद्यावधिक हुन सक्छन्। सेवा सर्तहरूमा हामीले गरेको कुनै परिवर्तनको सूचना लिन तपाईंले यस पृष्ठलाई नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्ने छ।
हामी सूचना नदिइकन सेवा फिर्ता लिन वा संशोधन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दछौं। यो वेबसाइट कुनै पनि कारणले कुनै पनि समय वा कुनै अवधिका लागि अनुपलब्ध छ भने हामी उत्तरदायी हुनेछैनौं। समय-समयमा हामी यो सम्पूर्ण वेबसाइटमा वा यसका केही भागहरूमा पहुँच प्रतिबन्धित गर्न सक्छौं।
यस वेबसाइटले अन्य वेबसाइटहरू ('लिंक गरिएका साइटहरू')मा लिंकहरू समावेश गर्न सक्छ, जुन www.howtouseabortpill.org द्वारा संचालित हुँदैनन्। यस वेबसाइटले लिंक गरिएका साइटहरूमा कुनै नियन्त्रण राख्दैन र तपाईंले तिनीहरूको प्रयोग गरेर तिनीहरू हराएको वा नोक्सानका लागि कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन। लिंक गरिएका साइटहरूको तपाईंको प्रयोग त्यस्ता साइटभित्र समावेश प्रत्येक सेवा र सर्तहरूअनुसार हुनेछ।
हामी तपाईंको जानकारी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तय गर्ने हाम्रो गोपनीयता नीति www.howtouseabortionpill.org/#privacy-policy. सकिन्छ। यो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं त्यसमा वर्णन गरिएको प्रक्रियालाई स्वीकृत गर्नुहुन्छ र तपाईंले प्रदान गर्नुभएको सबै डाटा ठीक छ भनेर प्रत्याभूति गर्नुहुन्छ।
तपाईंले यस वेबसाइटको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। तपाईंले गर्नुहुन्न: आपराधिक अपराधका लागि प्रतिबद्ध वा प्रोत्साहन; भाइरस, ट्रोजन, कीरा, लजिक बम वा अन्य कुनै सामग्री, हानिकारक टेक्नोलोजी, आत्मविश्वासको उल्लंघन वा कुनै पनि प्रकारको आपत्तिजनक वा अश्लील प्रसारण वा वितरण; सेवाको कुनै पनि पक्ष ह्याक गर्ने; डाटा भ्रष्ट गर्ने; अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई रिस उठाउने; कुनै पनि अन्य व्यक्तिको स्वामित्व अधिकारको उल्लंघन; कुनै पनि अनावश्यक विज्ञापन वा प्रचार सामग्री पठाउने, सामान्य भए तापनि 'स्प्याम'को रूपमा सन्दर्भित गर्ने; वा यस वेबसाइटमार्फत पहुँच गरिएको वा कुनै पनि कम्प्युटर सुविधाहरूको प्रदर्शन वा कार्यक्षमतालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने।
यस प्रावधानलाई उल्लंघन गर्नु अपराध हो र www.howtouseabortionpill.org ले सम्बन्धित कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि उल्लंघनको रिपोर्ट गरेर तिनीहरूलाई तपाईंको पहिचान प्रकट गर्दछन्।
हामी तपाईंको यस वेबसाइट, यसमा पोष्ट गरिएको कुनै सामग्री डाउनलोड गर्न, वा यसमा लिंक गरिएको कुनै पनि वेबसाइटमाको प्रयोगको कारण कुनै वितरित सेवामा हमला, भाइरस वा अन्य प्राविधिक हानिकारक सामग्रीले तपाईंको कम्प्युटर उपकरण, कम्प्युटर प्रोग्रामहरू, डाटा वा अन्य मालिकाना सामग्रीहरू वा अन्य संक्रमित सामग्रीलाई संक्रमित गर्नसक्ने हानि वा क्षतिका लागि जिम्मेवार हुनेछैनौं।
बौद्धिक सम्पत्ती, सफ्टवेयर र सामग्री
सबै सफ्टवेयर र सामग्री(फोटोग्राफिक छविहरूसहित)मा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू तपाईंलाई यस वेबसाइटमा वा यसमार्फत उपलब्ध गराइएको www.howtouseabortionpill.org वा यसका लाइसेन्सरहरूको सम्पत्ति हुन् र प्रतिलिपि अधिकार कानूनहरू र विश्वव्यापी सन्धिहरूद्वारा सुरक्षित छन्। त्यस्ता सबै अधिकारहरू www.howtouseabortionpill.org र यसका लाइसेन्सदाताहरूद्वारा आरक्षित छन्। तपाईं सामग्री केवल आफ्नै व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भण्डारण गर्न, छाप्न र प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई प्रकाशित, हेरफेर, वितरण गर्न वा अन्यथा पुन: उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको छैन, कुनै ढाँचामा, तपाईंलाई प्रदान गरिएको सामग्री वा कुनै पनि प्रतिलिपिहरू यस वेबसाइटमा देखा पर्दछ वा तपाईं कुनै व्यवसाय वा व्यवसायिक उद्यम सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
वेबसाइटमा प्रदान गरिएका सबै सामग्री र सामग्रीहरू सामान्य जानकारी, सामान्य छलफल, र शिक्षाका लागि मात्र हुन्। सामग्री "जस्ताको तस्तै", प्रदान गरिएको छ र त्यस्ता सामग्रीहरूमा तपाईंको प्रयोग वा निर्भरता केवल तपाईंको आफ्नै जोखिममा छ।
कुनै पनि परिस्थितिमा www.howtouseabortionpill.org ले व्यक्तिगत चोटसहित, वेबसाइटमा पोष्ट गरिएको सामग्री वा वेबसाइटका प्रयोगकर्ताहरू बीचको कुनै अन्तरक्रियाको परिणामस्वरूप, अनलाइन वा अफलाइन कुनै पनि प्रकारको नोक्सान वा क्षतिका लागि जिम्मेवारी लिनेछैन।
यस वेबसाइटमा लिंक गर्दै
तपाईं हाम्रो गृह पृष्ठमा लिंक गर्न सक्नुहुनेछ, यदि उचित त्यो र कानुनी छ र हाम्रो प्रतिष्ठालाई हानी गर्दैन वा यसको लाभ लिन सक्दैन भने तपाईं त्यस्तो तरिकाले कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले लिंक संघ बनाउन, अनुमोदन वा समर्थन गर्न, कुनै पनि सुझाव दिनका लागि भने स्थापना गर्नु हुँदैन। तपाईंले तपाईंको स्वामित्वमा नरहेका कुनै वेबसाईटको लिंक स्थापना गर्नु हुँदैन। यो वेबसाइटलाई कुनै पनि अन्य साइटमा फ्रेम गर्नु हुँदैन, न त तपाईं यस पृष्ठको कुनै पृष्ठको लिंक होम पेजबाहेक सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। सूचना बिना लिंक गर्ने अनुमति फिर्ता लिन हामीसँग अधिकार छ।
ट्रेडमार्कको स्वामित्व, व्यक्तित्वका छविहरू र तेस्रो पार्टी प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा अस्वीकरण
स्पष्ट रूपमा सबै व्यक्तिहरू (उनीहरूको नाम र छविहरूसहित) उल्लेख गरिएको बाहेक, www.howtouseabortionpill.orgमा उल्लेखित तेस्रो पार्टी ट्रेडमार्क र सामग्री, सेवाहरू र / वा यस वेबसाइटमा चित्रित स्थानहरू कुनै पनि हिसाबले सम्बन्धित छैनन्, वा सम्बन्धित रहने छैनन् र तपाईं यस्तो कनेक्शन वा सम्बद्धताको अस्तित्वमा भर पर्नुहुन्न। यस वेबसाइटमा चित्रित कुनै पनि ट्रेडमार्क / नाम सम्बन्धित ट्रेडमार्क मालिकहरूको स्वामित्वमा छन्। ट्रेड मार्क वा ब्रान्ड नामलाई कहीं सन्दर्भित गरिएको छ भने त्यसलाई केवल उत्पादन वा सेवाहरू वर्णन गर्न वा पहिचान गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ र कुनै पनि हिसाबले यी उत्पादनहरू वा सेवाहरू www.howtouseabortionpill.org द्वारा अनुमोदित वा जडान भएका छन् भन्ने दावी गर्न सकिंदैन।
तपाईं www.howtouseabortionpill.org, यसका निर्देशकहरू, अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, परामर्शदाताहरू, एजेन्टहरू, र सम्बद्धहरू, कुनै पनि र सबै तेस्रो पार्टी दावीहरू, दायित्व, क्षतिहरू / र / वा लागतहरू (कानूनी शुल्क समावेश छ, तर सीमित छैन), यस वेबसाइटको प्रयोगबाट आउने वा तपाईंको सेवा सर्तहरूको उल्लंघनलाई क्षतिपूर्ति, बचाव र हानीरहित रूपमा समेट्न सहमत हुनुहुन्छ।
www.howtouseabortionpill.orgसँग पूर्ण विवेकाधिकारका साथ बिना सूचना कुनै पनि समयमा र सेवाहरू र / वा यस वेबसाइटको कुनै पनि पृष्ठ संशोधन, हटाउने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार रहनेछ।
यदि सेवा सर्तहरूको कुनै पनि अंश लागू गर्न नसकिने (कुनै पनि प्रावधानसहित हामी तपाईंलाई हाम्रो दायित्व बाहिर समावेश गर्नसहित) छ भने त्यसले सेवा सर्तहरूको कुनै पनि अन्य अंशको कार्यान्वयनमा असर पर्ने छैन। सबै अन्य धारा पूर्ण शक्ति र प्रभावमा रहनेछन्। सम्भव भएसम्म कुनै पनि धारा / उप-धारा वा कुनै धारा / उप-धाराको केही अंशलाई बाँकी अंश वैध प्रस्तुत गर्न कटौती गर्न सकिन्छ, त्यस धारालाई तदनुसार व्याख्या गरिनेछ। वैकल्पिक रूपमा, कानून / अनुमति दिइएको अनुसार धारा / उप-धाराको मूल अर्थसँग मिल्दोजुल्दो छ भने तपाईं धारालाई परिमार्जन गरी व्याख्या गर्न सहमत हुनुहुन्छ।
हामी पहिले आएका कुनै उजूरी संचालन गर्ने प्रक्रिया चलाउँछौं र ती विवादहरू सुल्झाउनका लागि प्रयोग गर्दैछौं। तपाईंसँग केही गुनासो वा टिप्पणीहरू छन् भने कृपया हामीलाई सूचित गर्नुहोस्।
यदि तपाईं यी सर्तहरूको उल्लंघन गर्नुहुन्छ र हामीले कुनै कारबाही गरेनौं भने, हामी अझै यी शर्तहरू उल्लंघन गर्ने कुनै पनि अन्य अवस्थामा हाम्रो अधिकार र उपचार प्रयोग गर्ने हकदार हुनेछौं।
माथिकाका सेवा सर्तहरूले पार्टीहरूको सम्पूर्ण सम्झौता गठन गर्दछ र तपाईं र www.howtouseab बीचको कुनै पनि र सबै पूर्ववर्ती र समकालीन सम्झौताहरू हटाउँदछ। लिखित रूपमा र www.howtouseabortpill.org का निर्देशकद्वारा हस्ताक्षर गरेमा मात्र सेवा सर्तहरूको कुनै पनि प्रावधानको कुनै छूट प्रभावी हुनेछ।
www.howtouseabortionpill.org हाम्रो वेबसाइटमा जाने सबैको गोपनीयता र यसको मूल्य बुझ्छ र केवल तपाईंका लागि उपयोगी हुने तरिकामा र तपाईंको अधिकारहरू र कानून अन्तर्गत हाम्रा दायित्वहरू अनुरूप जानकारी संकलन र प्रयोग गर्दछ।
यो नीति तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगको सम्बन्धमा हामीबाट संकलित कुनै पनि र सबै डेटामा लागू हुन्छ। कृपया यो गोपनीयता नीति ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यसलाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईंले हाम्रो गोपनीयता नीतिमाति गरेको स्वीकृति तपाईंको वेबसाइटको पहिलो प्रयोगमा देखा पर्दछ। यदि तपाईं यस गोपनीयता नीतिलाई स्वीकार र सहमत गर्नुहुन्न भने, तपाईंले तुरून्त हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्न रोक्नु पर्नेछ।"
यस नीतिले निम्न कुरा कभर गर्दछ
यो गोपनीयता नीति तपाईंले हाम्रो वेबसाइटको उपयोग गरेका लागि मात्र लागू हुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा लिंक गरिएका कुनै पनि वेबसाइटहरू (चाहे हामीले ती लिंकहरू प्रदान गर्छौं वा अन्य प्रयोगकर्ताहरूद्वारा साझा गरिएको होस्)मा यसले विस्तार गर्दैन। हामीसँग तपाईंको डाटा कसरी संकलन गर्ने, भण्डारण गर्ने वा अन्य वेबसाइटहरू प्रयोग गर्ने कुरामा कुनै नियन्त्रण छैन र हामी तिनीहरूलाई कुनै डाटा प्रदान गर्नु अघि तपाईंलाई त्यस्ता वेबसाइटहरूका गोपनीयता नीतिहरू जाँच गर्न सल्लाह दिन्छौं।
हामीले संकलन गर्ने डेटा
तपाईंको सामान्य डाटा हाम्रो वेबसाइटद्वारा स्वचालित रूपमा संकलन गरिनेछ। तल उल्लेख गरिएको सामान्य डेटा हो जुन स्वचालित रूपमा संकलन हुन सक्छ
आइपी ​​ठेगाना र स्थान
वेब ब्राउजरको प्रकार र संस्करण अपरेटिङ प्रणाली
कुनै संदर्भ वेबसाइटको साथ शुरू भएका URL हरूको सूची, हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको गतिविधि
हामी कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य डेटा संकलन गर्दैनौं र भविष्यमा संकलन गर्न चाह्यौं भने हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई स्वेच्छाले स्वीकृति लिनेछौं।
हामी तपाईंको डाटा कसरी प्रयोग गर्छौं?
सबै सामान्य डाटा ईयु जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेसन (जीडीपीआर)को अनुरूप सुरक्षित भण्डारण गरिएको छ। हामी तपाईंको डेटाको उपयोग तपाईंलाई उत्तम सम्भव सेवा प्रदान गर्नका लागि गर्छौं। यसमा निम्न समावेश हुन्छन्
A.1. हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको पहुँच प्रदान गरी प्रबन्धन गर्दै
A.2. हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको अनुभव निजीकृत र टेलरिङ गर्दै
A.3. हाम्रो वेबसाइट र तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभवलाई निरन्तर सुधार गर्न हामीलाई सक्षम गर्नका लागि हाम्रो वेबसाईटको विश्लेषण [र प्रतिक्रिया संकलन] गर्ने।
केहि अवस्थाहरूमा डाटा संकलन कुनै वैधानिक वा सम्झौताको आवश्यकता हुन सक्छ।
हामी तपाईंका अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा जोगाउछौं र जीडीपीआर र अन्य लागू सान्दर्भिक कानूनहरू अन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरूको पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै व्यावहारिक कदमहरू चाल्नेछौं।
हामी तपाईंको डाटा कसरी र कहाँ भण्डारण गर्छौं?
यसरी हामी प्रयोगकर्ताले यसलाई मेटाउन अनुरोध नगरेसम्म सामान्य डाटा राख्दछौं। कुनै पनि घटनामा हामी तपाईंको डाटा राख्न आवश्यक छ कि छैन भनेर जाँच्न वार्षिक समीक्षा गर्छौं। हाम्रो नीतिका सर्तहरू बमोजिम आवश्यक नपरेमा तपाईंको डाटा मेटिनेछ।
तपाईंको केहि वा सबै डाटा भण्डार गरिन्छ वा यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र ('EEA') बाहिर स्थानान्तरण हुन सक्छ (EEA सबै EU सदस्य राज्यहरू, साथै नर्वे, आइसल्याण्ड र लिचटेन्सटेन समावेश गर्दछ)। तपाईंले हाम्रो वेबसाइटको उपयोग गरेपछि र हामीलाई जानकारी पेस गरेपछि यसमा स्वीकृति र सहमति दिएको मानिन्छ। हामी EEA बाहिर डाटा भण्डारण वा स्थानान्तरण गर्छौं भने हामी यो सुनिश्चित गर्नका लागि ती सबै व्यावहारिक कदमहरू चाल्नेछौं कि तपाईंको डाटा सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा व्यवहार गरिएको छ जस्तो कि यो EEA र GDPR भित्र सुरक्षित हुन्छ। यस्ता चरणहरूमा हामी र हामीले संलग्न गरेका कुनै पनि तेस्रो पक्षहरूका कानुनी रूपमा बाध्यकारी अनुबंध शर्तहरूको प्रयोग समावेश हुन सक्छ, तर सीमित भने हुन सक्दैन। प्रयोग भएका सुरक्षा कवचहरू हुन्:
B.1. डाटा SSL एन्क्रिप्टेड प्रोटोकलमार्फत सुरक्षित रूपान्तरण गरिन्छ,
B.2. डाटा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थित इन्क्रिप्टेड गरिएको हेरोकू सर्भरमा सुरक्षित रूपले भण्डार गरिएको छ।
हामीले लिने सुरक्षा उपायहरूको बाबजुद पनि यो कुरा याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि इन्टरनेटमार्फत डेटा प्रसारण पूर्ण रूपमा सुरक्षित नहुन सक्छ र तपाईंले हामीलाई इन्टरनेटमार्फत डेटा प्रसारण गर्दा उपयुक्त सावधानी अपनाउने सल्लाह दिइन्छ।
हामी तपाईंको डाटा साझा गर्छौं?
हामी तपाईंको डाटा हाम्रो होल्डिङ संगठन र यसका सहायक कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छौं।
हामी तपाईंलाई सक्षम सेवाहरू प्रदान गर्न तेस्रा पक्षहरूसँग सम्झौता गर्न सक्छौं। यसले खोज इञ्जिन सुविधाहरू, गुगल एनालिटिक्स, विज्ञापन र मार्केटिङ समावेश गर्न सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा तेस्रा पक्षहरूलाई तपाईंको केहि वा सबै सामान्य डाटाको पहुँच आवश्यक पर्दछ। तपाईंको कुनै पनि डाटा त्यस्तो उद्देश्यका लागि आवश्यक परेमा हामी तपाईंको सहमति लिनेछौं र तपाईंको डेटा सुरक्षित रूपमा, र तपाईंको अधिकारहरू अनुसार, हाम्रा दायित्वहरू, र कानून अन्तर्गत तेस्रो पक्षका दायित्वहरूका लागि प्रयोग हुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै व्यावहारिक कदम चाल्नेछौं। हामी हाल योसँग सम्झौता गर्दछौं:
डाटा प्रकट गरियो
गुगल विश्लेषण प्रभाव र श्रोताका बारेमा तथ्याङ्कहरू पाउनुहोस् यस विवरणका लागि गुगलसँग आफ्नै पृष्ठ छ: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en
हामी ट्राफिक, उपयोगको ढाँचा र अन्य जानकारीको डाटासहित हाम्रो वेबसाइटको उपयोगका बारे तथ्यांक कम्पाइल गर्न सक्छौं। हामी समय-समयमा त्यस्ता डाटा तेस्रो पक्षहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छौं। डाटा मात्र सेयर गरिने छ र कानूनको दायराभित्र प्रयोग गरिनेछ।
केही परिस्थितिहरूमा हामीलाई कानुनी तवरले हामीले राखेका केही डाटा साझेदारी गर्न आवश्यक हुन सक्छ, जसमा सामान्य डाटा, जस्तै, जहाँ हामी कानुनी कार्यवाहीमा संलग्न हुन्छौं, जहाँ हामी कानूनका आवश्यकताहरूको पालना गर्दछौं, अदालतको आदेश, वा एक सरकारी प्राधिकरण समावेश हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईंको डाटा साझा गर्नका लागि हामीलाई तपाईंबाट कुनै थप सहमति आवश्यक पर्दैन र हामीलाई आएको कुनै कानुनी बाध्यकारी अनुरोधअनुसार अनुपालन गर्नेछौं।
हामी प्रयोगकर्ताहरूका जानकारीको गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्न उपयुक्त प्राविधिक र मानक सुरक्षा प्रक्रियाहरूको प्रयोग गर्छौं। हाम्रा कर्मचारी, एजेन्ट र सहयोगीहरूले तपाईंको जानकारीको रक्षा गर्न सकेसम्म प्रयास गर्छन्।
आन्तरिक रूपमा, सबै प्रयोगकर्ताहरूको जानकारीको पहुँच तिनीहरूलाई प्रतिबन्धित छ जसलाई आफ्नो रोजगारका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नका लागि पहुँच चाहिन्छ र गोपनीयता सम्झौतामा प्रवेश गरेका हुन्छन्।
जानकारी रोक्ने र फिर्ता लिने अधिकार
हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध सबै सुविधाहरू र प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न तपाईंले सबमिट गर्न वा निश्चित डाटाको संग्रह गर्न अनुमति दिन आवश्यक पर्दछ।
तपाईं कसरी आफ्नो डाटामा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको हामीसँग भएको कुनै पनि व्यक्तिगत डाटाको प्रतिलिपि माग्ने कानूनी अधिकार छ। थप विवरणका लागि हामीलाई privacy@howtouseabortionpill.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्
के हामी कुकीहरू प्रयोग गर्छौं?
"कुकीज" साना सूचनाहरू हुन् जुन तपाईंको कम्प्यूटरको हार्ड ड्राइवमा वेबसाइटद्वारा राखिएको हुन्छ। कुकीहरूले तपाईंबाट कुनै पनि संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी संकलन गर्दैनन्। हामी कुकीहरूलाई आफ्नो वेब पृष्ठ ट्राफिकको बारेमा डेटा विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्दछौं जसले हामीलाई तपाईंको भविष्यका भ्रमणहरूका लागि तपाईंका प्राथमिकताहरू बचत गर्दछ। यसले हामीलाई तपाईंको रूचिअनुसार हाम्रो वेबसाइट अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ जसले गर्दा हामीलाई आफ्ना ग्राहकहरूलाई अधिक निजीकृत सेवा प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईं कुकीहरू स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया सावधान हुनुहोस् कुकीहरू अस्वीकार गरेमा तपाईं हाम्रो वेबसाइटलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न असक्षम नहुन सक्नुहुन्छ।
हाम्रो वेबसाइटले हामीलाई मानिसहरूले हाम्रो वेबसाइट कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा अझ राम्ररी बुझ्नका लागि गुगल विश्लेषणहरू, पिविक र भिमिओ प्रयोगका उपयोग तथ्यांकहरू संकलन र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्दछ। हामीले तिनीहरूको प्रयोग गर्नाले तपाईंको गोपनीयता वा तपाईंको वेबसाइटको सुरक्षित प्रयोगमा कुनै जोखिम पैदा गर्दैन। यसले निरन्तर हाम्रो वेबसाइट सुधार गर्न सक्षम गर्दछ, यसले तपाईंको अनुभवलाई राम्रो र अधिक उपयोगी बनाउँदछ।
लिंक गरिएका वेबसाइटहरू
यस वेबसाइटले अन्य वेबसाइटहरूमा लिंकहरू समावेश गर्न सक्दछ। कृपया सतर्क रहनुहोस् कि हामी यस्ता कुनै अन्य वेबसाइटहरूको गोपनीयता अभ्यासहरूका लागि जिम्मेवार छैनौं। हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले यो वेबसाइट छोड्दा सचेत हुन र उनीहरूले हेर्ने प्रत्येक वेबसाइटका गोपनीयता कथनहरू पढ्न हौसला दिन्छौं। हामीले लिंक गर्न वेबसाइटहरूलाई होशियारीका साथ छनौट गर्छौं, यो गोपनीयता सूचना हाम्रो आफ्नै वेबसाइटमा संकलन गरिएको जानकारीमा मात्र लागू हुन्छ।
यदि तपाईंसँग हाम्रो वेबसाइट वा यो गोपनीयता नीतिका बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई यो ईमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस्@howtouseabortionpill.org
कृपया यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बारेमा लगत राखिएको डाटाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न हो भने तपाईंको जिज्ञासा स्पष्ट हुनुपर्छ।
हामी यो गोपनीयता नीतिमा समय-समयमा आवश्यक ठानेको बेला वा कानूनद्वारा आवश्यक परेमा परिवर्तन गर्न सक्छौं। कुनै परिवर्तनहरू तुरून्त हाम्रो वेबसाइटमा पोष्ट हुनेछन् र परिवर्तनपछि हाम्रो वेबसाइट तपाईंले पहिलो प्रयोगमा गोपनीयता नीतिका शर्तहरू स्वीकार गरीएको छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईंले यस पृष्ठलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक राखिराख्न जाँच गर्नुहोस्।
यो वेब्साइट्मा दिएका सबै जानकारीहरु HowToUseAbortionPill.org का टोलीद्वारा नेशनल गर्भपात महासंघ, आईपास, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी. के. टी ईन्टरनेशनल र क्याराफेम मर्फत दिएका मापदण्ड र प्रोटोकोलको अधारमा लेखिएको हो ।
राष्ट्रिय गर्भपात महासंघ (एन.ए.एफ) उत्तरी अमेरिकामा गर्भपतन प्रदायकहरूको पेशेवर संघ हो, र यसले समर्थक विकल्प आन्दोलनमा नेतृत्व लेरहेको छ। HowToUseAbortionPill.org मा दिएका जानकारीहरु 2020 क्लिनिकल नीति दिशानिर्देश अधरित NAF द्वारा जारी गरिएको छ।
आइपस एक मात्र येस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जो गर्भपतन र गर्भनिरोधक गर्नेहरुको सुरक्षाको हितमा केंद्रित छ । HowToUseAbortionPill.org मा दिएका जानकारीहरु क्लीनिकल अपडेट प्रजनन स्वास्थ्य 2019 मा Ipas द्वारा जारी गरियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) संयुक्त राष्ट्र संघको एक विशेष एजेन्सी हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि जिम्मेवार छ । HowToUseAbortionPill.org मा दिएका जानकारीहरु २०१२ सुरक्षित गर्भपतन: स्वास्थ्य प्रणालिहरूको लागि प्राविधिक र नीति निर्देशन WHO द्वारा जारी गरिएको हो ।
डि. के. टि एक पंजीकृत यस्तो संस्था हो जस्ले निसुल्क सेवा दिरहेको छ । यो संस्था 1989 परिवार ब्यबहार, एचआईभी /एड्स रोकथाम र सुरक्षित गर्भपतनको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएका केहि ठूला देशहरूमा सामाजिक मार्केटिंगको शक्ति केन्द्रित गर्नको लगि स्थापना गरिएको हो ।
क्याराफेम क्लिनिक सुबिधाजनक येस्तो व्यावसायिक गर्भपतन हेरचाह नेटवर्क हो जहा मानिसहरूले परिवार योजना प्रदान गर्दछ ।